မေးခွန်း 787-800 ကျိကျိတက်ဗူးပြဿနာ။
1 months ago 8 တစ်နှစ် #632 by ricsmi
အားလုံးမင်္ဂလာပါပဲမကြာသေးမီက FSX အရှေ့တောင်ကစားခြင်းနှင့်တကယ်ခံစားစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ငါ့ TDS 787-800 ကျိကျိတက် pack ကို installed နှင့်ဈရှိသည်သာပြဿနာကို VC ကိုအတွက်ယာဉ်ခလုတ်ကိုနှင့်ဘူးသီးအလုပ်အဘယ်သူအားမျှငါသည် VC အတွက်ငါ့အလိုရှိသမျှလေယာဉ်တစ်စင်းပျံသန်းနှင့်ဤဈသကဲ့သို့ငါ့ကိုဒီလေယာဉ်တင်သတ်ဖြတ်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်င့် အဆိုပါ 2d ယာဉ်မခံမရပ်နိုင်။
1 months ago 8 တစ်နှစ် #633 by Gh0stRider203
က2အင်ဂျင်ငှက်ရဲ့ကတည်းကကောင်းစွာ, ငါကတကယ်တော့သင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့ VC ကို၏ကိုငါသိ၏။ သင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းလေယာဉ်တစ်စင်းကို download လုပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မယ်
ဒီ VC ကိုထွက်ဖလှယ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်
ဒီတစ်ခုအတွက် VC ကိုအစားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတကယ်ကမသုံးပါဘူးဒါပေမယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါသည်
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: ricsmi
1 months ago 8 တစ်နှစ် #634 by ricsmi
အခြားပြဿနာတယ်ငါကြည့်ယူပါလိမ့်မယ် ok ကျေးဇူးတင်စကား, ကိုယ့်အပြင်ပန်းအမြင်အပေါ်လေယာဉ်မှပူးတွဲပါကြီးမားတဲ့ pusher ထရပ်ကားရှိကွောငျးသတိပြုမိသည်။
မည်သို့ဈကရီစရာကြည့်အဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်ရမယ့် default အနေနဲ့တဦးတည်း၏အလမ်းအတွက် clip ။
1 months ago 8 တစ်နှစ် #635 by Gh0stRider203
ပထမဦးဆုံး VC ကို, NOW က stowaways? သင်တစ်ဦးချိုးဖမ်းလို့မရဘူးနဲ့တူပုံရသည်! ဟားဟား
ငါရိုးသားစွာခန့်မသေချာဘူးသော။ ငါ 787 (ထို 772LR ပိုကောင်းစွမ်းရည်နှင့် range ရှိပါတယ်) ပျံသန်းကြပါဘူး။ ကျွန်မအကြံပြုနိုင်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာဟာ utility ကိုပြတင်းပေါက်ရှိမယ့်လျှင်ကြည့်ဖို့ပြားအောက်မှာကြည့်ရှုသည်။ ငါစီမံကိန်းပွင့်လင်းက Sky ငှက်အချို့ကြောင့်များငါသိ၏။
1 months ago 8 တစ်နှစ် #640 by ricsmi
ယင်းကနှင်းကို turn off နိုငျသော Utility ကို panel ကအဲဒီမှာသူကပြောပါတယ်ငါ့ကိုဖတ်ပါကတဆင့်ဖတ်ရှုပြီးနောက်, အ panel ကို ctrl +7နှိပ်ပေမယ့်ကြားတွင်ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်ပြသနိုင်ဖို့ထင်နေသည်။
0.355 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်